Ithegi: umhlalutyi wokhuseleko lolwazi | Martech Zone
Ithegi: umhlalutyi wokhuseleko lolwazi
Ikamva alisebenzi kwaye alizange libe khona
NgoLwesibini, Agasti 2, 2016 Douglas Karr
Iparanoia ngokubhekisele kwikamva lobukrelekrele bokwenziwa, iirobhothi, kunye noomatshini kufuneka ziyekwe. Lonke uguquko kwimizi-mveliso nakwezobuchwephesha embalini luvulele abantu ithuba elingasikelwanga mda lokusebenzisa italente yabo kunye nobuchule bokuyila. Ayisiyo ukuba imisebenzi ethile ayipheli-ewe bayayenza. Kodwa loo misebenzi ithathelwa indawo yimisebenzi emitsha. Njengoko ndijonga ejikeleze iofisi yam namhlanje kwaye ndijonga kwakhona umsebenzi wethu, yonke into intsha! Ndijonge kwaye ndibonise kwiAppleTV yethu,